बमको भाषाशास्त्र- विविधा - कान्तिपुर समाचार
माघ ४, २०७६ विमल निभा
बिगब्रटरको बम हान्ने शैली बडो मौलिक खालको रहेको छ । यसको युद्धक विमानले पहिले त कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकमा हठात् बम खसाल्छ । त्यसपछि ‘श्वेत भवन’ मा रहेका मिस्टर प्रेसिडेन्ट त्यसलाई आरामसँग अंग्रेजी भाषामा उल्था गरेर दुनियाँलाई सुनाउने गर्छन् । यही अहिलेसम्म चलिआएको सुपरपावर बिगब्रदरको बमको सम्पूर्ण भाषाशास्त्र हो ।
मेरो अंग्रेजी भाषा पर्याप्त कमजोर रहेको छ । तथापि मैले सुपरपावर बिग्रब्रदरको बमको भाषा बुझ्न थालेंँ कि के हो ! केही दिन अघि इरानी कमाण्डर कासिम सुलेमानी बमले इराकमा मारिंँदा म पनि घाइते भएको थिएँ । यसको अर्थ मिस्टर प्रेसिडेन्टको ठाडो आदेशमा मेरो टाउकोमाथि बम खसालिएको भन्ने पनि होइन । त्यो दिन म अचानक खुट्टा चिप्लिएर भर्‍याङबाट लडेको थिएँ । तर अहिलेको प्रधान सवाल मेरो एकथान घाइते टाउकोको होइन । वस्तुत: बहुचर्चित एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को हो । झन्डै यही बेला हाम्रो विदेश मन्त्री कमरेड प्रदीप ज्ञवालीले अति उत्फुल्ल मुद्रामा घोषणा गरेका थिए– ‘एमसीसीको कुनै रणनीतिक प्रयोजन रहेको छैन ।’ त्यसो भए यसमा कुनै पनि किसिमका बम आदि समावेश रहेको छैन त कमरेड ? यो बहुतै खुसीको बात भयो । तर एमसीसीसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्धित बिगब्रदरको बोलीको टोन त अर्कै रहेको छ नि ! यही सिलसिलामा उसको एम्बेसीको प्रवक्ताले के स्पष्ट गरे भने एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै हो । अब हामीले कसको भनाइलाई मान्ने ? मेरो विचारमा त आफ्नै मुलुकका विदेश मन्त्रीको कुरा मान्नु बढियो हुन्छ ।
कुनै विदेशी दूतावासका पराई मानिसको कुरा किन मान्ने ? हेर्नोस्, एक प्रकारले पुँजीवादी मुलुकका व्यक्तिसँग एक समाजवादी मुलुकका मन्त्रीको कुरा नमिल्नु बेसै हो । म त पुरै विदेशमन्त्री कमरेड ज्ञवालीको साथमा छु । तर स्वयम् एमसीसी बाहकले नै अघि बढेर एमसीसीलाई रणनीतिक अंग भनिरहेको सन्दर्भमा मनमा थोरै शंका त अवश्य उत्पन्न हुन्छ– कतै हाम्रा विदेशमन्त्री साँच्चिकै विदेशमन्त्री त होइनन् ? मेरो मतलव कुनै विदेशको नै मन्त्री भनेर नठानियोस् । वास्तवमा प्रदीप ज्ञवाली कमरेड स्वदेशकै विदेशमन्त्री हुन् । मेरो कुरामा पत्यार नलागे सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग डाइरेक्ट सोधे हुन्छ । एक छिनपछि मेरो मनमा एउटा अर्को शंका उत्पन्न हुन्छ– यो सोधाइले पनि के हुन्छ र ? हाम्रा प्रधानमन्त्री कमरेड ओली कुनै एमसीसी विरोधी त पक्कै होइनन् । उनी त खाँट्टी एमसीसीप्रेमी हुन् । त्यसकारण बेला–मौकामा निर्धक्कसँग मुलुकमा एमसीसी नल्याई छाड्दिन भनिरहेकै छन् । यसले मेरो मनमा फेरि पनि शंका उत्पन्न भएको छ– कतै हामी एमसीसीको असीम कृपाले बम आदिको रेन्जमा त आउन लागेका छैनौं ?
सुपरपावर बिगब्रदरको इतिहास भनेकै अविच्छिन्न रूपमा बमकै इतिहास हो । र आजसम्मको विश्व इतिहासमा एकमात्र यसलाई नै परमाणु बम पड्काएर जापानका लाखौंलाख नरनारी र ससाना बालक/बालिका निर्दोष ज्यान हरण गर्ने गौरव प्राप्त छ । तर भियतनामको युद्धमा भने बिगब्रदरको बम त्यति कामलाग्ने भएन । त्यस युद्धमा धेरै भियतनामीहरूले बमबाट मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो । र अन्तत: भियतनामी नेता कमरेड हो चि मिन्हको नेतृत्वमा भियतनामका जनताहरूले बिगब्रदरको बमबाट मर्न ठाडै इनकार गरेका थिए । त्यसैले आफ्ना सबै बम बोकेर सुपरपावर बिगब्रदर त्यहाँबाट लुरुलुरु फर्कन बाध्य भएको थियो । र हाल भियतनाममा काम नलागेका तमाम् बमलाई अन्य मुलुकमा काममा लगाइएको छ । तर उसको बम वर्षाउने टेक्निक भने केही परिवर्तित भएको देखिन्छ । हो, अफगानिस्तानको युद्धदेखि बिगब्रदरले बम सँगसँगै राहतको पकेट पनि युद्धक विमानबाट खसाउन थालेको छ । यसको परिणामस्वरुप अफगानिस्तान, सिरिया, इराक, लिबिया आदि मुलुकका जनताले पकेटमा भएको राहतको केक आदि टन्न खाएर आरामसँग बमबाट गर्ने सुविधा पाएको छ ।
नेपाली जनताहरू हो, अपार आनन्दको कुरो के हो भने सुपरपावरको एमसीसीबाट अग्रिम राहतस्वरुप लगभग पचपन्न अर्ब डलरको प्राप्ति हुने भएको छ । त्यसउसले सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओली ब्रान्डेट ‘कम्युनिस्ट राज्य’ मा हामी बिगब्रदरको एमसीसी जनित बम–समले मृत्युन्मुख अर्थात् मर्ने नै भए पनि सित्तैमा चाहिँ पर्ने छैनौं है !
प्रकाशित : माघ ४, २०७६ ०८:१९
पाँच सेटको रोमान्च
काठमाडौँ — क्लब भलिबलमा पछिल्लो तीन वर्षयता न्यु डायमन्ड र एपीएफकै दबदबा रहँदै आएको छ । पछिल्ला हरेक प्रतियोगिताको फाइनलमा यी दुईको भेट हुने गर्छ । शुक्रबार काठमाडौंमा सुरु आरबीबी–एनभीए कप क्लब च्याम्पियनसिप भलिबलमा भने न्यु डायमन्डलाई अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले कठिन चुनौती दियो । दुईपल्ट पछि परेको स्थिति उल्टाउँदै न्यु डायमन्डले खेलमा जितेको हो । महिला भलिबलमा तीन विभागीय र न्यु डायमन्डकै दबदबा छ ।
एपीएफ र न्यु डायमन्ड अघि–अघि, त्रिभुवन आर्मी र पुलिस पछि–पछि हुन्थे । राष्ट्रिय टोलीका युवा खेलाडीहरू पुनम चन्द र उषा विष्टलाई अनुबन्ध गरेको पुलिस आफ्नो विरासत फर्काउने लक्ष्यमा छ । तर अनुभवी खेलाडीको अभाव प्रस्ट छ । राष्ट्रिय टोलीका तीन सदस्य (सेटर अरुणा शाही, लिबेरो सलिना श्रेष्ठ र स्पाइकर प्रतिभा माली) प्रेरित न्यु डायमन्डले पहिलो सेट १७–२५ ले गुमायो । मुख्यतः यिनै तीन खेलाडीको भरमा रहेको न्यु डायमन्डको कमजोर ब्लकको फाइदा पुलिसले लिएको थियो ।
दोस्रो सेट २५–१८ ले जितेर खेल बराबरीमा ल्यायो । प्रतिस्पर्धात्मक बनेको तेस्रो सेटमा कुनै समय न्यु डायमन्डले ११–१५ को अग्रता बनाइसकेको थियो । त्यसलाई जोगाउन नसक्दा २३–२५ ले सेट गुमाउन पुग्यो र खेलमा पुनः पछि पर्‍यो ।
चौथो सेटमा सुरुमै पछि परेको डायमन्डले पुनरागमनसहित २५–१८ ले नै सेट जित्यो । अन्तिम तथा निर्णायक सेटमा भने सुरुदेखि नै अग्रता बनाएको उसले अन्तिमसम्म कायम राख्न सफल रह्यो । अन्तिम सेट न्यु डायमन्डले १५–११ ले जित्यो । टोलीले समूह ‘बी’ मा विजयी सुरुआत गरेको छ । पुरुषतर्फ साबिक विजेता त्रिभुवन आर्मी र एपीएफले आफ्नो खेलमा जितका छन् । पहिलो खेलमा आर्मीले आरजी भलिबल ग्रुपलाई ३–० को सोझो सेटमा हरायो । आर्मीले २५–९, २५–१६, २५–९ को सेटमा खेल जित्यो ।
बुलबुले रारा क्लबलाई ३–१ को सेटमा हराउन एपीएफलाई भने हम्मेहम्मे पर्‍यो । स्तरीय तीन विदेशी खेलाडीसहित पहिलोपल्ट प्रतियोगितामा सहभागी बुलबुले क्लबले पहिलो सेट २३–२५ ले जितेको थियो । तर त्यसपछि तीन सेटमा एपीएफले सम्हालिएको खेल प्रदर्शन गर्‍यो । एपीएफले पछिल्ला सेट २५–२३, २५–२०, २५–१८ ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । शनिबार महिलामा एपीएफ र जावलाखेल तथा भरतपुर महानगर र आर्मी तथा पुरुषतर्फ आरजी ग्रुप र नयाँबजार तथा पुलिस र पार्वती भलिबल क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
प्रकाशित : माघ ४, २०७६ ०८:१८